चामल कुहाउने कर्मचारीलाई कार्वाहीबाट जोगाउन चामलको ‘रिपोलिसिङ’ : RajdhaniDaily.com
HomeEditor-Picksचामल कुहाउने कर्मचारीलाई कार्वाहीबाट जोगाउन चामलको ‘रिपोलिसिङ’
काठमाडौँ । सरकारीको पूर्ण स्वमित्वमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको ४० लाख ४३ हजार ९२६ रुपैयाँ बराबरको बास्मती चामल गादोममै कुहाउने कर्मचारी बचाउन अनेक तिगडम सुरु भएको छ । कम्पनीको थापाथली कार्यालयको गोदाममा कार्यरत कर्मचारीको चरम लापरवाहीले गोदाम नम्बर २४ मा ३२३ दशमलव १७ क्वीन्टल र ३० नम्बर गोदाममा १६४ दशमलव शून्य ५ क्वीन्टल ४० लाख ४३ हजार ९२६ रुपैयाँ बराबरको बास्मती चामल कुहिएको छ । चरम लापरवाही गर्ने कर्मचारीलाई कारबाहीबाट बचाउन कम्पनी अनेक तिगडम गरी रहेको छ ।
स्रोतका अनुसार गोदाममा कुहिएको ४० लाख ४३ हजार ९२६ रुपैयाँ बराबरको बास्मती चामल नष्ट गर्नु पर्दा चामल कुहाउने कर्मचारीले भरपाइ गर्नु पर्ने भएकाले कर्मचारीलाई बचाउन कम्पनी अनेक तिगडम गर्न लागेको छ । कम्पनी कुहिएको बास्मती चामल ‘रि पोलिसिङ’ गरी राम्रो चामलमा मिसाएर काठमाडौँ बाहिर पठाउने खेलमा लागेको एक कर्मचारीले बचाए । कुहिएको चामललाई खान योग्य छ भनी दावी गर्न मनपरी चामलको नमुना लिएर परिक्षण गर्ने काम गरेको स्रोतको भनाई छ ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्यको गोदाममा कुहिएको बास्मती चामल नमुना परिक्षण गरी यसअघि नै नष्ट निर्देशन दिइसकेको छ । विभागको निर्देशनलाई अटेड गर्दै लापरबाही गर्न कर्मचारीलाई कारबाहीबाट बचाउन कम्पनी अनेक तिगडम गर्न लागेको स्रोतले जानकारी दिए ।
गोदाममा कुहिएको ४० लाख ४३ हजार ९२६ रुपैयाँ बराबरको बास्मती चामल नष्ट गर्नु पर्दा चामल कुहाउने कर्मचारीले भरपाइ गर्नु पर्ने भएकाले कर्मचारीलाई बचाउन कम्पनी अनेक तिगडम गर्न लागेको छ
कम्पनीले चामलको पोलिसिङ’ गरी बालकोट स्थित जेष्ट ल्याबोरेटरिज एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रा. ली.मा परिक्षण गरेर ल्याएको हो । खाद्य प्रविधि विभागले उक्त चामल विभागको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशालामा १० वटा नमुना परिक्षण खान योग्य नभएको पुष्टी गरी सकेको थियो । ३ मंसिर २०७६ मा राजधानी दैनिकमा ‘खाद्यका कर्मचारीको चरम लापरबाहीका कारण गोदाममै कुहियो लाखौं मूल्यको चामल’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाहीका लागि छानविन गरी रहेको थियो । अख्तियारले चामलको छानविन क्रममा विभागमा १० पुस २०७६ मा १० वटा नमुना जाँच परिक्षण गरेको थियो । छानविनका लागि अख्तियारले विभागलाई परिक्षणका लागि दिएको १० वटा नै नमुना जाँच परिक्षण गर्दा सबै नमुना फेल भएका थियो । विभागले २८ माघ २०७६ मै गोदाममा रहेको ४ सय ८७ क्विन्टल २२ किलो चामल नष्ट गरी व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई बोधार्थ दिई परिपत्र गरी सकेको थियो ।
अहिले करिब २ वर्ष पछि फेरी खाद्य व्यापार कम्पनी कर्मचारीलाई बचाउन नष्ट गर्न भनेको गोदाममा कुहिएको चामलको पोलिसिङ’ गरी बालकोट स्थित जेष्ट ल्याबोरेटरिज एन्ड रिसर्च सेन्टर प्राली. मा चामलको नमुना लिइ परिक्षण गर्ने काम गरेको ।
कार्यालयको निर्देशन अनुसार सो चामलको नमुना बालकोट स्थित जेष्ट ल्याबोरेटरिज एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रा. ली.मा परिक्षण गरेर ल्याएको खाद्य कम्पनीका फुड प्राविधिक विशेष कट्टेल जानकारी दिए । प्राविधिक कट्टेलले आप्mनो मनले नभएर कार्यालयको निर्देशन अनुसार चामलको नमुना परिक्षण गर्न भनेपछि परिक्षण गरेको बताए ।
कम्पनीका सूचना अधिकारी सर्मिला न्यौपाने सुवेदीले अख्तियारको निर्देशन अनुसार कम्पनीको गोदाममा कुहिएको बास्मती चामलको व्यवस्थापन गर्न पोलिसिङ’ गरेको जानकारी दिइन । उनले चामलको पोलिसिङ’ गरेको भए पनि केका लागि प्रयोग गर्ने भन्ने निर्णय भइनकेको बताइन् । उनले कम्पनीले चामलको व्यवस्थापनका लागि ‘रि पोलिसिङ’ गरे पनि कम्पनीले आप्mनो मनपरी एक्लै बजारमा विक्री वितरणमा गर्ने कुनै उद्देश्य नरहेको दावी गरिन् । सम्बन्धित निकायको निर्देशन बिना कम्पनीले सो चामल बजारमा विक्रीका लागि नपठाउने बताइन् । सम्बन्धित निकायको निर्देशन र निर्णय अनुसार चामलको व्यवस्थापन गर्ने सूचना अधिकारी न्यौपानेको भनाईको छ ।
विभागले कम्पनीलाई सो चामललाई नष्ट गर्न निर्देशन समेत दिएको विभागको प्रवक्ता मोहन कृष्ण महर्जनले जानकारी दिए । प्रवक्ता महर्जतले विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ र कम्पनी स्यंमको रोहवरमा सिल गरेको चामलको गोदामबाट मनपरी नमुना लिएर परिक्षण गरेको रिपोर्टले कुनै मान्यता नपाउने बताए । उनले कम्पनीले जे जस्तो गरेपनि गोदाममा भएको जति परिमाणको चामल छ सबै नष्ट व्यवस्थापन गरी विभागलाई जानकारी गराउनु पर्ने बताए ।
कम्पनीका अनुसार आव २०७२/७३ को जनकपुर मिलबाट ल्याइएको करिब ५ हजार क्वीन्टल चामलमध्ये ४८७ क्वीन्टल २२ किलो बास्मती चामल कुहिएको छ । कम्पनीको धान किन्दा र कुटाउँदासम्मको लागत खर्च प्रतिकिलो ६८ रुपैयाँ मात्र परेको थियो । सो चामल काठमाडौं आइपुग्दा प्रतिकिलो तीन रुपैयाँ ढुवानी भाडा जोड्दा ७१ रुपैयाँ प्रतिकिलो पर्न जान्छ । कम्पनीले निजी व्यापारीजस्तै उपभोक्ताबाट बढी नाफा असुल्नका लागि चामलको प्रतिकिलो १३० रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरेको स्रोतको दाबी छ ।
यदि, कम्पनीले थोरै मुनाफा राखेर बिक्री गरेको भए यति ठूलो परिमाणको चामल गोदाममै कुहिने अवस्था नआउने स्रोतको भनाइ छ । कम्पनीले २०७२÷७३ मा बिक्री गरेको प्रतिकिलो १३० रुपैयाँका दरले हिसाब गर्ने हो भने हाल थापाथली गोदाममा ६३ लाख ३३ हजार ८६० मूल्यको चामल कुहिएको स्रोतको भनाइ छ ।
थापाथलीस्थित गोदाम नम्बर २४ मा ३२३ दशमलव १७ क्वीन्टल र ३० नम्बर गोदाममा १६४ दशमलव शून्य ५ क्वीन्टल बास्मती चामल कुहिएको पाइएको छ । कम्पनीले सो बास्मती चामल २०७६ मा प्रतिकिलो ८३ रुपैयाँका दरले बिक्री गर्ने गरेको थियो । प्रतिकिलो ८३ रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा ४० लाख ४३ हजार ९२६ रुपैयाँको चामल गोदामै कुहिएको अवस्थामा छ ।
किमाथांका नाका बन्द हुँदा खाद्यान्न संकट , हेलिकोप्टरबाट लगिँदै
नाङ्गो पाखामा वृक्षारोपण गर्दे सेना (फाेटाेफिचर)